Wasiirka Amniga Soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto faahfaahinta qaraxii Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka Amniga Soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto faahfaahinta qaraxii Muqdisho
October 21, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigi doonta faahfaahinta qaraxii Muqdisho kaasoo dilay ugu yaraan 360 qof, sida uu sheegay wasiir.
Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay gudaha Muqdisho, Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow ayaa sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan qaraxii Muqdisho maalmaha soo socda.
Ciidanka ammaanka ayaa xiray dhowr qof oo lala xiriirinayo qaraxii gaariga ee Muqdisho, sida uu sheegay wasiirku.
Weerarkii Sabtidii dhacay ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya.
Maleeshiyada Al-Shabaab kuwaasoo mar walba qaada qaraxyada dhimashada leh ee Muqdisho ka dhaca, ayaan sheegan masuuliyada weerarkaas, balse masuuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa aaminsan in ay iyagu ka dambeeyaan weerarka.
July 24, 2017 Ugu yaraan afar askari oo katirsan maamulka Koonfur Galbeed oo lagu dilay qarax
Somalia’s Foreign Minister Abdisalam Omer says that as a result of successful joint operations by the Somali military and the African Union’s peacekeeping force “we have militarily defeated the evil that is al-Shabab.” He said [...]